Diyo post :: गृह प्रवक्ता भन्छन्,‘अहिलेसम्म गाडी जलाउनेको को हो ? पहिचान हुनसकेको छैन’ गृह प्रवक्ता भन्छन्,‘अहिलेसम्म गाडी जलाउनेको को हो ? पहिचान हुनसकेको छैन’ - Diyo post
गृह प्रवक्ता भन्छन्,‘अहिलेसम्म गाडी जलाउनेको को हो ? पहिचान हुनसकेको छैन’
काठमाडौं, १६ पुस । शुक्रबार एमाले भातृ संगठन युवा संघका कार्यकर्ताले राजधानीको बानेश्वरमा एक सरकारी गाडीमा आगजनी गरेपनि सरकारले कुनै कारबाही अगाडी बढाएको छैन । गृहमन्त्रालयले अहिलेसम्म घटनाको दोषी पत्ता लगाउन समेत सकेको छैन ।
गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थिका अनुसार सरकारले घटनाका दोषीलाई खोजी गरिरहेको छ तर, अहिलेसम्म अपराधीको पहिचान भएको छैन । ‘हामीले कानुनी रुपमा घटनाको अनुसन्धान गरिरहेका छौँ,’ उनले दियोपोस्टसँग भने,‘आगजनीमा समलग्नहरुको पहिचान भैसकेको छैन । हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ ।’
घटना भएको २४ घण्टा वित्दासम्म प्रहरीले एकजना पनि पक्राउ गर्न सकेको छैन । भिडियो फूटेजहरुमा ठूला दलका नेताका आफन्तदेखि राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारीसम्म गाडी तोडफोडमा समलग्न देखिएका थिए ।
तर, उनीहरुलाई पक्राउ गर्न प्रहरी चुकेको छ । शुक्रबार बानेश्वरको इन्द्रेणी कम्प्लेक्समा रोकिराखेको अवस्थामा बा २ झ १३९२ नम्बरको स्कोरपीओ गाडी जलाइएको थियो । यसरी दिनदहाडै सरकारी जाडीमा आगजनी भएपछि सामाजिक सञ्जालमा सर्वत्र विरोध भइरहेको छ ।